Melange ntambo siyinhlanganisela eliyingqayizivele lokuluhlaza anemibala ehlukene. Kulona, ungakwazi tie ngisho into elula, kodwa uzobheka engavamile futhi zokudala. Phakathi kwezakhi wezigqoko okungase kwenziwe elinama efanayo, kungase kushiwo amajezi, ponchos, waistcoats nokunye. Futhi uma zonke lezi zinto inguqulo monophonic lizofuna okuyisicefe futhi okuyisidina, lonke spectrum anemibala ehlukene, beze ekuphileni futhi babe ezikhangayo futhi eyingqayizivele.
Umbuzo ukuthi uthayi ka melange ntambo, ngaphambili benesithakazelo abantu abaningi Ukugunda. Namuhla ungathola izinkulungwane izinhlobonhlobo imikhiqizo ehlukene ezokwenza nje sihle lihambisana lokuluhlaza ezinjalo. Nokho, ukusebenza nge ntambo melange, kubalulekile ukugcina uhlobo ibhalansi. Uma ibhola siqukethe shades eziningi, kuyinto efiselekayo makudle izitayela elula. Nokho, uma ntambo kuthululwe amathoni ezimbili noma ezintathu, amaphethini eziyinkimbinkimbi ucwaningo ngeke neze ezifanele.
Melange ntambo - inketho ilungele labo nje ukufunda obumbene. Iqiniso lokuthi kwaba ngenxa inani elikhulu imibala kanye iridescence amaphutha amancane emsebenzini ngeke sigqamile kakhulu. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe le nto ephawulekayo ukuthi engakutholi endala. Coloured lokuluhlaza kungenzeka minyaka eyishumi ezayo, noma ngisho amathathu, kodwa ngeke ezibukeka zizinhle. Ngo womshini izingubo kubalulekile acabangele kuphela njengoba ukuwa ngentambo nalokho iphethini akha. Ukuze lula umsebenzi, ungakwazi ukuthenga isethi ngomumo eyenziwe ntambo naleli cebo, bese umphumela ziyoyidlula wonke amathemba.
Ungakhohlwa ukuthi Melange ntambo - ikhambi ephelele womshini izingubo zezingane. Lokho izingane zonke izinto kufanele uyokhanya futhi ekhangayo. Ukukhetha imodeli elula ne cap imikhono, lutho melange lokuluhlaza kungenziwa Ithungelwe ezinsukwini ezimbalwa nje. Phela uma ntambo ezinjalo kuba isisekelo cap futhi isikhafu ke la izesekeli ingalunga usuku olulodwa.
Melange ntambo, njenganoma iyiphi enye, ungaba ugqinsi ezahlukene. Yiqiniso, i-main umbala aluka atholakala obukhulu izindikimba kusengutsheni yoboya. Nokho, ungathola izinhlobo ezinhle kunazo mikhiqizo, okuyinto abe nombala ofanayo. Uma inhlanganisela imibala akhethwe kahle, omunye ungenza itshali emnene kakhulu futhi enhle, Cape noma ukukhanya ekwindla isikhafu.
Ideal lizofuna zokuhlobisa izigqoko, ponchos futhi couplings.
Le sizini, phakathi amaqoqo entsha abaklami ehola okwandile ke Melange ntambo. Models banikezwe on the catwalk iningi ababethi efudumele iyashintsha iyaphupha ibe amathoni, nge ukuhwebelana soft and smooth. Phakathi izinto wathungela nje kuphela nezembatho shawls kanye sweaters, ngisho iziketi. Lokhu kwaba ubufakazi obengeziwe bokuthi iNdodana Melange ntambo - indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi kulula ukwenza izinto evamile yokuqala futhi ekhangayo.
Khetha ayindilinga afanele efekethisiwe
Njengoba e "uLizwi" ukushintsha Isikhala umugqa: izindlela ezintathu
Turgenev, "Intuthu": isifinyezo. "Smoke" Turgenev: abalingiswa abasemqoka kule noveli, ngesakhiwo
UMtshali Standard, ulwelwesi is profiled: incazelo, Ukucaciswa nezici obandayo